Galmudug oo Heshiis dhex dhigtay beelo gobalka Hiraan ku dagaalamay – Radio Daljir
Abriil 30, 2018 3:34 g 0
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Galmudug Maxamed Xayir Nuur oo ka hadlayay dib u heshiisiin loo sameynayay Beelo Maleeshiyaadkooda ku dagaalamay Magaalada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Odoyaasha labada dhinac laga doonayo in dib u heshiisiin rasmi ah ay wada gaaraan.
Isku dhacdyada labada Maleeshiyo ayuu sheegay in ay saameysay Deegaanka, sidoo kalana ay waxyeeleysay Dadka Magaalada.
Odoyaasha dhaqanka ee labada dhinac waxa uu tilmaamay in ay dhigtaan xeer lagu adkeynayo dib u heshiisiintooda si aanan si fudud u jabin heshiiska.
Nabad ka dhalata Deegaanka waxa uu ku xiray in Odoyaasha ay kasoo go’o, maadaama dhalinyarada ka qeyb qaadanaya Dagaal Beeleedyada aanan jirin Odoyaal soo qabanaya kolka uu dil ama dhaawac geysto.
Waxa uu ugu baaqay in Culumada iyo qeybaha kala duwan ee Bushada ay dhexda u xirtaan sidii ay meel ugu soo wada jeesan lahaayeen qofkii dib usoo celiyo Colaadda Heshiiska laga gaaray.